14 July 2010 yeyintnge Diary.doc14 July 2010 Yeyintnge Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/14/20100အကြံပြုခြင်း
ရိုးမ ၃။ ဇူလိုင် ၁၄၊ ၂၀၁၀
AP posted: 6:13 AM 07/14/10
YANGON, Myanmar -Foreign investment in Myanmar, one of the world's poorest and most authoritarian countries, dropped more than two thirds last fiscal year as Chinese investment tailed off and economic sanctions on the military-ruled nation continued, according to government figures.
Myanmar, also known as Burma, saw seven new foreign investments during 12 months, four of which were in its oil and gas sector. These resource extraction investments — three from Malaysia and one from the United Arab Emirates — were worth $278.6 million and accounted for more than 88 percent of the total investment during the fiscal year.
Since Myanmar liberalized its investment code in 1988, it has attracted large investments in hydroelectric power, oil and gas and mining — mainly from neighboring countries such as Thailand.
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၃ ပုံ ၂ ပုံ ကျဆင်း
အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းက စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ အရေးယူခံထားရတဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားက လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ကျဆင်းခဲ့တယ်လို့ ဇူလိုင် ၁၄ ရက် ဒီကနေ့မှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရ စီမံကိန်းနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန စာရင်းတွေအရ သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ တူးဖော်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများတွင် တရုတ်ကုမ္ပဏီများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေခြင်းကို မြန်မာနိုင်ငံမှ တိုင်းရင်းသားများ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့တွင် ၂ဝဝ၉ အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်နေ့က ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
၂ဝဝ၉ မတ်လကနေ အခုနှစ်မတ်လအထိ ၁၂ လတာ ကာလအတွင်း နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တန်ဖိုးဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁ ထောင်နီးပါးကနေ သန်း ၃ဝဝ ကျော်အထိ ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။
အခုလို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သိသိသာသာ ကျဆင်းရတာဟာ ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ကာလအတွင်း တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကျဆင်းခဲ့တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံဟာ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်အတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းမှာ သန်း ၉ဝဝ နီးပါး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ ကဏ္ဍတွေကတော့ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပြီး အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု (ယူအေအီး)နဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံတွေက အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၈ဝ နီးပါး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မင်းသမီးတွေ အမှုဇြစ်နေကြတဲ့ခေတ်မှာ မင်းသမီး ပန်းဖြူ ရဲ့အမှု့အကြောင်းသတင်းကြားပြီးပြီလား။ သူ့အပေါ်ယုတ်မာ ရက်စက်မိုက်ရိုင်းသွားတဲ့ကိုဇော်ဝင်းရှိန် ဆိုတဲ့သူကို ပြစ်မှု့ပုဒ်မ ၄၁၇ နဲ့ တရားစွဲထားတာတဲ့လေ။ဇော်ဝင်းရှိန် ဆိုတာသိလား ?။ ဟိုတစ်လောက DVB မှာ ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့၊ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ် က နံမည်၈လုံးနဲ့လူကြီးသား နဲ့ ရှယ်ယာစပ်တူဖွင့်ပြီး၊ကမန်းကတန်း ပြန်ဖျက်လိုက်တဲ့၊7LEKKER COFFEE SHOP ပိုင်ရှင်၊ DELTAUNITED ဘောလုံးအသင်း ရဲ့ ဥက္ကဌ ဟောင်း ၊ဧရာဟင်္သာ ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ ၂၀၀၂ ခုမှာ စတင်ပြီး ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တဲ့။ ၂၀၀၃ခုနှစ်ထဲလည်းရောက်ရော ဇော်ဝင်းရှိန်ရဲ့ လက်ထပ်ကြမယ် ဆိုတဲ့ စကားကိုယုံကြည်ပြီး အတူအိပ်ဖြစ်ကြရောတဲ့။ အဒီအချိန်တုန်းက ဇော်ဝင်းရှိန်က လမ်း၂၀၊ အမှတ် ၁၂၃ ဆိုတဲ့ တိုက်ခန်းကျဉ်းကျဉ်း စုတ်စုတ်လေးထဲမှာ မောင်နှမတွေအများကြီးနဲ့ တိုးဝှေ့နေရတာ။အဲဒီတော့ပန်းဖြူနဲ့ဇော်ဝင်းရှိန်တို့ဟာ နှစ်ယောက်အတူအမြန်နေရဖို့၊ ပိုက်ဆံစုကြတယ်တဲ့။ သိပ်တောင်မကြာလိုက်ပါဘူး။ဇော်ဝင်းရှိန် ချမ်းသာလာတယ်တဲ့။ပိုက်ဆံတွေအများကြီးစုမိလာတယ်တဲ့။ဘယ်လိုကြောင့် ချမ်းသာလာသလဲဆိုရင်ဇော်ဝင်းရှိန်က တရားမ၀င်တဲ့တင်သွင်းမှုတွေ၊ဥပဒေနဲ့မလွတ်ကင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနယ်စပ်က
နေခိုးသွင်းလာတာရယ်၊သူ့အဖေဦးသန်းစိန်ကဟင်္သာတမြို့မှာရှိတဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာက ရိုးသားတဲ့သူတွေဆီက ရွှေတွေကို ကလိမ်ကကျစ်လိမ်ယူပြီး၊ ရန်ကုန်မှာရှောင်ပုန်းရင်း ကြာဆံစက်တွေလုပ်တာကြောင့်တဲ့။ တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေကအရာရာကို ခွင့်လွတ်စိတ်၊သူ့အကုသိုလ်သူ ခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်တွေနဲ့တရားမစွဲခဲ့ကြဘူးပေါ့။ဇော်ဝင်းရှိန်တို့က မြန်မာတွေမဟုတ်ဘူး။ တရုတ်ပြည် ၊ ဖုကျန့်ပြည်နယ်ကနေ
သူ့မိဘတွေကို လိမ်လည်မှုနဲ့ လိုက်ဖမ်းလို့ မြန်မာပြည်ထဲဝင်ပြီးပြေးပုန်းနေတဲ့ တရုတ်တွေ။ အဲဒီတော့ လုပ်ရဲကိုင်ရဲနဲ့ငရဲမကြောက်တာ မဆန်းဘူးပေါ့။ နောက်တော့ဇော်ဝင်းရှိန်ဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့အချမ်းသာဆုံး (၁၀)ဦး စာရင်းဝင် ဖြစ်သွားရော။ ဒီတခါကြီးပွားပုံကတော့နည်းနည်းဆန်းတယ် ပြောရမလားပဲ။ မြန်မာပြည်က အခွင့်အာဏာရှိတဲ့လူကြီးတွေဆီကို လက်ဆောင်ပဏ္ဍာတွေပေး၊ လူကြီးတွေသွားမဲ့ လမ်းကြောင်းတွေမှာသူကကြိုရောက်ပြီး ရေ၊မီးအစုံ စီစဉ်ပေးတယ်တဲ့။ တစ်လောကနာမည်ရှစ်လုံးနဲ့အာဏာရှိတဲ့လူကြီး စင်ကာပူမှာဆေးသွားကုတော့ လေဆိပ်မှာမက်စ်အချိုရည်ပိုင်ရှင် ဦးဇော်ဇော်နဲ့ ဇော်ဝင်းရှိန်တို့ဟာနာမည်ရှစ်လုံးနဲ့ လူကြီးရဲ့ အ၀တ်ထုတ်ကို သူဆွဲမယ်၊ ငါဆွဲမယ်နဲ့လုဆွဲနေကြတာ ဣနြေ္ဒပျက်လွန်းလို့စင်ကာပူလေဆိပ်မှာတွေ့လိုက်ရတဲ့ ဗမာတွေခင်မျာ သူတို့ကိုအင်မတန်လိမ်မာပြီး၊လူကြီးရိုသေလိုက်ကြတာလို့သာဓုခေါ်မယ်မှမကြံသေးဘူး၊ ဇော်ဝင်းရှိန်ဆိုတဲ့လူက သူ့မိခင်ကိုလူရှေ့သူရှေ့မှာတောင်ဆဲဆိုနေကြပဲဆိုတာ သိလိုက်ရပြန်ရော (ကိုယ်မိခင်ကို ခုနလူကြီးတွေရဲ့
သူပိုင်တဲ့ ဧရာဟင်္သာကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်လည်း ခုနကလူကြီးသားတွေ၊
၀န်ကြီးသားတွေ၊ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရေးမှူးရဲ့သားတွေကို ရှယ်ယာတွေ အလကားပေး၊(တစ်ခုခုတော့
ပြန်ရမှာပေါ့လေ)၊ ဒါရိုက်တာနေရာတွေပေးနဲ့ပေါ့။ ကုမ္ပဏီကို စာရင်းစစ်တွေလာစစ်တော့မယ့် သတင်းကြားရင်
ကုမ္ပဏီရဲ့ကွန်ပျူတာတွေကို ဟက်ဒစ်တွေ အလုံးလိုက်ချိန်းပစ်လိုက်ရောတဲ့။ ဆေးရုံတွေဆောက်၊ ဈေးတွေဆောက်နဲ့ဟော အခုလဲ ဟင်္သာတမြို့မှာ ရှော့ပင်းစင်တာပါတဲ့ကားအဝေးပြေးကွင်းဆောက်မလို့တဲ့။ သိန်းပေါင်းသုံးသောင်းကျော်တန် ဆိုပဲ။ တကယ်တော့ အဲဒီမြေနေရာတွေဟာ လယ်သမားတွေဆီက လယ်ယာမြေတွေကို အခွင့်အာဏာရှိတဲ့ ခုနက ပုဂ္ဂိုလ်တွေ တိုင်းမှူးတွေရဲ့အာဏာကိုယူသုံးပြီး၊ မတန်တဆဈေးနှိမ်လို့ ၀ယ်ထားတာတွေလေ။ ရိုးသားတဲ့တောသူတောင်သားတွေဟာ မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ကြည့်နေရတော့တယ်တဲ့။
ပန်းဖြူကတော့ ဒီအကြောင်းတွေကို အစက မသိခဲ့ဘူးလေ။ ရိုးသားတဲ့
ဖိုးသခွားလို့ပဲထင်ခဲ့တာ။ ပိုက်ဆံအဆင်ပြေလို့ လက်ထပ်မယ်လည်းဆိုရော ဇော်ဝင်းရှိန်ကမယူနိုင်ဘူးဖြစ်ရော။ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေက အဲဒီကျမှ ဖွင့်ပြောလို့ အကြောင်းစုံကို သိလိုက်ရတယ်တဲ့။အဆင်မပြေခင်တုန်းကတော့ ပန်းဖြူဆီကနေ ဇော်ဝင်းရှိန် ကလူကိုတင်မဟုတ်ဘူး ။ ယူသွားတာတွေ ရှိသေးတယ်တဲ့။(ချူစားတာနေမှာပေါ့)။ စီးပွားရေးအဆင်ပြေသွားတော့၊ကန်ထုတ်ပြီလေ။
အစောပိုင်းတုန်းကပန်းဖြူကလည်း သည်းခံပါတယ်။ဖူးစာမပါလို့မပေါင်းရဘူးလို့ မှတ်တယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့်
သည်းခံခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့သူတွေ ကို ခေါင်းပေါ်တတ်နင်းနေတာဟာဇော်ဝင်းရှိန်ရဲ့ထုံးစံဖြစ်နေပြီဆိုတော့၊ ပန်းဖြူကို ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းတဲ့စကားတွေနဲ့ကျေးဇူးတွေကိုမေ့၊ ပါးစပ်အရသာခံပြီး၊သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမဟုတ်တာတွေပြောပါရောလား။ ဒါကိုပန်းဖြူ ပြန်ကြားတော့၊ဖုန်းဆက်ပြီး၊ဆက်မပြောဖို့၊ရပ်ဖို့ပြောတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့်သကောင့်သား က မရပ်ဘဲ၊ ပို ပိုဆိုးပြီးပြောတော့၊ပန်းဖြူကသည်းမခံနိုင်တဲ့အဆုံး၊ ဆက်ပြီး မိုက်ရိုင်းတဲ့အပြုအမှူတွေ၊ အပြောအဆိုတွေ ထပ်လုပ်နေမယ်ဆိုရင် တရားစွဲတော့မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့။သူတို့လိုငွေရှင်၊ ဓနရှင်တွေကပြောရင်၊ သူ့တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလက်ခံယုံကြည်ကြတာမို့လို့တဲ့လေ။ အဲဒီမှာ ဇော်ဝင်းရှိန် ကဘာပြန်ပြောသလဲ ဆိုရင်၊
တရားစွဲချင်လည်းစွဲပေါ့တဲ့။ငါကတော့ဂရုမစိုက်ဘူးတဲ့။ ငါ့မှာ ကူညီပေးမယ့် အာဏာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂါလ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ပါးပါးမလုပ်နဲ့၊ထူထူလုပ်။ငါပိုင်တဲ့ လူကြီးတွေက ပေါ့သေးသေးမဟုတ်ဘူးတဲ့။ အဲဒီတော့ ပန်းဖြူကပြန်ပြောတယ်။ အမှန်တရားကိုဘယ်သူ့မှ မျက်ကွယ်ပြုလို့ မရဘူး။ အမှားကိုအမှန်လုပ်လို့
မရဘူး။တရားဥပဒေဆိုတာရှိတယ် ဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက်တယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် ပန်းဖြူခမျာ သူ့ထင်မြင်ချက်တွေလွဲမှားတယ်ဆိုတာ တကယ် တရားရင်ဆိုင်ရတော့မှသိသွားရတယ်လေ။ တရားဥပဒေအပေါ်မှာ အာဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂါလ်တွေအများကြီးတတ်ထိုင်နေကြတာဘဲလေ။ဇော်ဝင်းရှိန် ဘက်ကပန်းဖြူနဲ့ ကာမလည်းမဆက်ဆံဖူးဘူး။ရည်းစားလည်း မဟုတ်ဘူး။ဘယ်တုန်းကမှ ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှမပတ်သတ်ဖူးဘူးလို့ငြင်းတယ်လေ။ နောက်တော့မြို့နယ်တရားသူကြီးက ပန်းဖြူ ကိုသူ့ရုံးခန်းထဲ ခေါ်ပြောတယ်တဲ့။ နစ်နာကြေးဆိုပြီးတောင်းပြီး၊ကျေအေးလိုက်ပါလားတဲ့။အမှု့ကို စစ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ၊ ပန်းဖြူဘက်ကမှန်ကန်တယ်။ သက်သေပြည့်စုံတယ်ဆိုတာ သိတယ်တဲ့။ဒါပေမယ့် သူတို့မှာမလွန်ဆန် နိုင်တဲ့ဖိအားတွေရှိတယ်တဲ့။ သူတို့ရာထူးလေး ပြုတ်သွားမှာစိုးလို့၊ အမှန်တရားဘက်ကနေရပ်တည်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်တဲ့။ ပန်းဖြူကပြန်ပြောလိုက်တယ်၊ပိုက်ဆံလိုချင်လို့စွဲတာမဟုတ်ဘူး၊ ဥပဒေမဲ့စိတ်ထင်တိုင်းယုတ်မာနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ကိုတရားဥပဒေနဲ့ အညီ အမှန်တရားအတိုင်းအပြစ်ပေးစေချင်တာပါလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်တဲ့။
နောက်တော့အဲဒီ မြို့နယ်တရားသူကြီး ကစွဲချက်တင်သင့်၊မတင်သင့်အမိန့်ကို ဘယ်လိုကောက်ချက်ချသလဲဆိုတော့၊ နှစ်ယောက်သားချစ်သူဘာဝဖက်လှဲတကင်းရိုက်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုရိုးရိုးသားသားခင်မင်မှုပုံစံတဲ့ (ဟုတ်၊မဟုတ်စဉ်းစားလို့ရအောင် ဓါတ်ပုံတွေပါကြိုးစားရှာပြီးတင်ထားတယ်)၊ဟိုတယ်မှာ နှစ်ယောက်အတူ တစ်ခန်းတည်း၊ နေတာကို တွေ့တဲ့လူသက်သေ ကိုလည်း၊ တစ်ခန်းတည်းနေတာကိုတွေ့တာဘဲရှိတာတဲ့၊ sexual လုပ်တာကို တွေ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။(ချစ်သူတွေ၊ စိတ်မထိန်းနိုင်လို့ အတူနေမယ်ဆိုရင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို Live Showပြထားရမယ်ထင်တယ်နော်)။ အဆိုးဆုံးကမရိုသေ့စကား၊ ဇော်ဝင်းရှိန် ရဲ့ ဖွားဖက်တော် က အမှတ်အသားကိုပြောတာကိုလည်း၊ ထည့်သွင်းမသုံးသပ်ဘူး။ (ကြည့်ရတာ ဇော်ဝင်းရှိန် က လူတကာကို သူ့ဖွားဖက်တော်လှန်ပြနေကျထင်တယ်။)နောက်ဆုံးမှာတော့ မြို့နယ်တရားရုံး ကစွဲချက်မတင်သင့်ဆိုပြီး၊ကောက်ချက်ချသွားတယ်လေ။ အခုပန်းဖြူ ကခရိုင်အဆင့်၊ တိုင်းအဆင့်၊ ဗဟိုအဆင့်ဆင့်တတ်ဖို့ လုပ်နေတယ်တဲ့။တရားဥပဒေဆိုတာအမှန်တရားဘက်ကနေ အမြဲရပ်တည်တယ်ဆိုတဲ့ ၊ယုံကြည်မှု့ တွေရှိနေသေးတယ်တဲ့လေ။အဲဒီတော့တရားဥပဒေကအမှန်တရားဘက်မှာရှိသလား။
အာဏာရှင်၊ငွေရှင်တွေဆီမှာရှိသလားဆိုတာထပ်ရလာမဲ့သတင်းတွေကို ဆက်လက်ဖေါ်ပြပေးမှာဖြစ်သလိ၊ုဇော်ဝင်းရှိန်ရဲု့ပေးကမ်းရက်ရောမှု့ တွေကိုလည်းတစ်ပေါင်းတည်းပြောပြမယ်နော်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီသတင်းကြားပြီးတဲ့အခါမှာတစ်ခုဘဲ၊ အကြံ
ဒီလို တရားရေးကို လုပ်ချင်တိုင်း၊လုပ်ခွင့်ရနေမယ်ဆိုရင်“တရားရုံးတွေကို ဓါတ်ဆီဆိုင်
တွေလိုပဲ ပုပ္ပလိကပြောင်းပေးလိုက်သင့်ပြီ” ဟုအကြံပေးလိုက်ချင်ပါတော့တယ်။
သင်္ကြန်ရက်အတွင်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှုနှင့် ပါတ်သက်ပြီး မိမိတို့ အဖွဲ့ မှ
ထပ်မံသိရှိရသည့် သတင်းအချက်အလက်များအား မြန်မာနိုင်ငံသား ပြည်သူများထံ
ထပ်မံပြီး ဖြန့် ဝေလိုက်ပါသည်၊
explain for people (July 13).pdf file here
Explain for People (July 13)
From 1990 Elections To 2010 Elections By Aung Linn Htut.pdf
From 1990 Elections to 2010 Elections by Aung Linn Htut
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/14/2010 1 အကြံပြုခြင်း
ဂန္ထ၀င်မြောက်အနုပညာရှင် ထူးအိမ်သင် အား ချစ်မြတ်နိုးသော တေးချစ်သူများခင်ဗျား.........
NEW VERSION DVD အဖြစ်စီစဉ်၍ပြန်လည်ဖြန့်ချီနေပြီဖြစ်ပါသည်။
တာဝန်ခံဖြန့်ချီနေသူများထံတွင်တိုက်ရိုက်သော်၎င်း၊ အင်တာနက်စာမျက်နှာ http://www.aungwin.com/htoo.html မှတဆင့် Paypal/ Credit Crad အသုံးပြု၍၄င်း မှာယူအားပေးနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
ရရှိမည့်အကျိုးအမြတ်အားလုံးအား ထူးအိမ်သင်၏တဦးတည်းသောချစ်သမီး မိကွန်းထော
အား ပေးအပ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ တေးချစ်သူ ထူးအိမ်သင်ပရိသတ်များမှလည်းချစ်ခြင်းအားဖြင့်မှာယူအားပေးကြပါရန် ကျွန်ုပ်တို့
ထူးအိမ်သင်အားချစ်မြတ်နိုးသော ညီအကိုမောင်နှမများမှလေးစားစွာ ချစ်ခြင်းအားဖြင့်တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ။
*ထူးအိမ်သင် အားချစ်မြတ်နိုးသော ညီအကိုမောင်နှမများ*
* မှာယူအားပေးရန် *
PHILLIP AUNG WIN
Digi Product Online, Inc
101 4th Ave Suite 2R
(718) 398-9277, b2bclass@gmail.com
MA CHAW SU (718) 335-5214
KO WAI LA (646) 462-9017, (718) 505-0080
MOE CHO THIN (626) 480-8118, chowunna@gmail.com
KHIN THIRI NANDAR SOE (650) 758-1290, khinthirinandarsoe@gmail.com
CHO TOO (260) 420-1023
KYAW THET (MON) (260) 494-0789
KO MYOE (917) 832-6887, komyoedesign@gmail.com